विराटनगरका मनकारी युवा : जोखिममा बाँड्दैछन् सडकमा खाना
विराटनगर, ११ भदौ । कोरोना महामारीका कारण हामी घरबाट निस्कन डराउँछौं । आफैं सर्तक भएन बस्नुुपर्ने यस्तो बेलामा झन् अपरिचित कहिल्यै नदेखेको, नचिनेको मानिसको छेउमा जानेबारे सोच्न सक्दैनौं । स्थानीय प्रशासनले पनि अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन अपिल गरेको छ । तर महामारीको समयमा विराटनगरका केही युुवाहरुको समूह भने सडकपेटीमा बसिरहेका असाह्य, अशक्त, गरिब र दैनिक मजदुरी गरेर खानेको भोक मेटाउन लागिपरेको छ ।
विराटनगरका युवा अभियन्ता वसिम आलमको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको निःशुुल्क खाना खुवाउने अभियान विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागूू भएसँगै पुनः सुरु भएको हो । संक्रमण बढ्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाका कारण सडक पेटीमा भोकभोकै बसेकाहरुलाई युवाहरुले खाना वितरण गरिरहेका हुन् ।
निःशुुल्क खाना खुवाउने समूहमा तीन महिला र १९ पुुरुष छन् । समूूहमा ४६ वर्षका कर्ण बोखिमदेखि १६ वर्षीय क्रिश्चल आले मगरसम्म सक्रिय छन् ।
कोरोना महामारीसँग डटेर अघि बढ्न सक्ने जोकोही यो समूहमा आएर काम गर्न सक्छन् । युवा समूूहले न कुनै पार्टीको झण्डा बोकेको छ न कुनै संस्थाको ब्यानर । स्वतःस्फूूर्तरुपमा लागिपरेको यो युवा समूूह कोरोना महामारीका कारण सुुरु भएको लकडाउन अवधिमा स्थापना भएको हो । समूूहमा विभिन्न उमेरका युुवाहरु छन्, उनीहरुको आफ्नो छुुट्टै राजनीतिक आस्था छ तर उद्देश्य भने एउटै छ- कोरोना महामारी र लकडाउनको कारण भोकै बसेकाहरुको भोक मोट्ने ।
कसरी सुुरु भयो अभियान ?
अभियानमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहे पनि अभियान सुरु गर्ने सोच भने वसिम आलमको थियो । नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गतेबाट देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको थियो । विराटनगरको अवस्थाबारे जानकार रहेका आलम महानगरको अवस्था हेर्न सडकमा निस्किए । यातायात, कलकारखाना, बजार, पसल, होटल, व्यवसाय ठप्प रहेको अवस्थामा काम नपाएर सडकमा भोकै भौंतारिएर बसेका मानिसको हालत देखेर उनको मन कुँडियो । ‘सबैजना कोरोनासँग डराएर बसिरहने हो भने सडकमा बस्ने यी बेसहाराको बिचल्ली हुन्छ, यिनीहरु भौकै मर्छन् !’ सडकमा बस्नेहरुको दयनीय अवस्था देखेपछि आलमको दिमागमा यस्तै कुरा आयो । केही गर्न नसके पनि यस्तो अवस्थामा उनीहरुको भोक मेट्न मात्रै भए पनि मैले केही गर्नै पर्छ भन्ने आलमले स्वःनिर्णय गरेसँगै अभियान सुरु भयो ।
‘मेरा साथीहरुलाई योजना सुनाएँ, वहाँहरु पनि अभियानमा सहभागी हुन तयार हुनु भयो । आन्तरिकरुपमा केही तयारी ग¥यौं अनि अभियान सुरु ग¥यौं,’ आलम भन्छन्, ‘खाना खानेको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि सहयोगी दाताहरुसमक्ष कुरा राख्यौं, वहाँहरुले पनि सहयोग गर्नुभयो । यसरी नै झण्डै तीन महिना बिहान–बेलुका नै निःशुल्क खाना बाँड्यौं ।’
दोस्रो चरणको निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानमा पनि भीड उस्तै
निषेधाज्ञा लागू भएपछि हाल पुनःसञ्चालनमा आएको अभियानमा पहिलेको जस्तो भीड नभए पनि दैनिकरुपमा मानिसको संख्या बढिरहेको अभियन्ता आलम बताउँछन् । ‘हामीले खाना खान आउनेहरुलाई तपाई जस्तै अरु पनि हुनुहुन्छ भने लिएर आउनुस् भनेका छौं,’ आलम भन्छन्, ‘पहिलो पटक अभियान सञ्चालन गर्दा पनि सुरुवाती दिनमा ३०–४० हुँदै दैनिक चार सयसम्म पुगेको थियो ।’
कोरोना महामारी रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले लगाएको झण्डै चार महिना लामो लकडाउन अवधिमा सुरु भएको अभियान ८० दिनसम्म चलेको थियो । बन्दाबन्दीको अन्त्य भएसँगै स्थिती सामान्य हुन थालेपछि अभियान रोकिनु अघिसम्म झण्डै चार सय मानिसले हरेक दिन बिहान–बेलुका–निःशुल्क खाना खुवाउने अभियानबाट आफ्नो भोक मेटेका थिए । शनिबार बेलुकाबाट पुनः सुरु भएको हो ।
सहयोगी सबैलाई धन्यवाद !
सडक पेटीमा बस्ने मानिसको दयनीय अवस्था देखेर आफूमा आएको सोचले सार्थकता पाएकोमा आलम सबैलाई धन्यवाद दिन्छन् । ‘ममात्र केही होइन, मेरो समूहमा हुने सबैजना धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, वहाँहरुका मेहनेत र समर्पणका लागि सलाम भन्न चाहन्छु,’ आलम भन्छन्, ‘विशेषगरी सहयोगी मन, जसको सहयोगले यो सबै सम्भव भएको छ ।’
कसरी तयारी र वितरण हुन्छ त निःशुल्क खाना ?
अभियानका लागि आवश्यक अर्थ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्वयम् आलमको छ भने अन्य व्यवस्थापनको जिम्मा समूहका अन्य दुई सदस्य पप्पु अन्सारी र पेरिस सुवेदीको छ । सहयोगी दाताबाट जम्मा हुने सहयोगको सबै रेकर्ड समूहसँग छ । पछिल्लो समय समूहले निःशुल्क खाना अभियानको लागि छुट्टै फेसबुक पेजसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । पेजमा दाताले दिएका सामान वा नगद सार्वजनिक गरिन्छ । नाम सार्वजनिक गर्न नचाहनेको दाताको नाम भने खुलाइने गरिएको छैन ।
सहयोगी दाताबाट जम्मा हुने रकम र सामग्रीले नै सञ्चालनमा रहेको अभियानले हाल विराटनगरमा रहेको रोयल बिर्यानी हाउसमा बिहान र बेलुका नै खाना तयार पारेर प्याकिङ गर्दै आइरहेको छ ।
अभियानका सदस्यसमेत रहेको बिर्यानी हाउसका सञ्चालक पप्पु अन्सारीले अघिल्लो पटक ८० दिनसम्म अभियान सञ्चानल हुँदासमेत आफ्नो होटल र भान्सा प्रयोग गर्न दिएका थिए । यसबाहेक पहिलो चरणमा दैनिक चार सय जनालाई खाना वितरण गर्नुपर्ने स्थिति रहँदा कृष्ण पार्टी प्यालेसले समेत खाना बनाउन आफूहरुलाई सहयोग गरेको आलमले बताए । अभियानमा आवश्यक पर्ने हरिया सागसब्जीका लागि भने कटहरीस्थित नयाँ बजारका कृषक कोपिन्द्र सिंहले सुरुवाती दिनबाट नै सहयोग गर्दै आइरहेका छन् र पुनः सुरु भएको अभियानमा पनि उनको सहयोगले निरन्तरता पाएको छ ।
बिहान–बेलुका नै रोयल बिर्यानी हाउसमा तयारी गरिने खाना विराटनगरका मुख्य चार स्थानबाट वितरण गरिँदै आएको छ । हाटखोला, हनुमान मन्दिर, तीनपैनी र रोडशेष चोकछेउमा प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि र बेलुक साढे सात बजेबाट खाना वितरण गरिँदै आएको छ । यीबाहेक हिँड्डुल गर्न नसक्ने, मानसिक सन्तुलन गुमाएका र अन्य अशक्तलाई भने उनीहरु बसिरहेकै स्थानमा समूहका सदस्यले आफैं खाना पु¥याउँदै आइरहेका छन् ।
अभियानका सहभागीहरु खाना तयारी र प्याकिङ गर्न साथ समूहमा बाँडिएर सडकपेटीमा खानाका लागि बसिरहेका मानिसलाई खाना वितरण गर्न पुग्न गरेका छन् ।
अभियानले सडकपेटीका भोका मानिसहरुलाई निःशुल्क खाना खुवाउनुअलवा लकडाउन अवधिभरि प्रदेश राजधानी विराटनगरमा विभिन्न स्थानबाट अध्ययनको सिलसिलमा रहेका र लकडाउनबाट प्रभावित बनेका दुई सय विद्यार्थीलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो । यसबाहेक पूर्वाञ्चल बाल सेवा आश्रम, विराटेश्वर वृद्धा आश्रम र अपांगता समूहका १९ घर परिवारलाई विभिन्न चरणमा आवश्यक सहयोग गरेको थियो ।